Guddiga Doorashooyinka oo sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay ku xiran tahay is-afgarad siyaasadeed – Kalfadhi
Guddiga Doorashooyinka oo sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay ku xiran tahay is-afgarad siyaasadeed
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Madaxa-banaan, Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey), ayaa muujisay in inta ay siyaasiyiinta Soomaalida ahi isku maqan yihiin uu shisheeyuhu ka faa’iideysan doono. Waxay uga digtay in ay sii kala baadaan, iyaga oo is-cadweysanaya, kana indha xiranaya sida ay arrintaas uga faa’iideysan karaan qeybo kale oo aan Soomaali ahayn
“Waxaan idin kula dardaarmayaa: yeynaan noqon isku maqan, kala maqan, laguna maqan yahay” ayey Xaliima Yarey ku tiri Xildhibaannada Golaha Shacabka, iyada oo toos u eegeysa. Hadalkaas ayaa ka turjumaya sida ay lafaha uga dagaalamaan siyaasiyaanta iyo suurtagalnimada iney jirto qeyb saddexaad oo ka faa’iideysan karta dagaalkaas.
Hadalkan ayey Arbacadii ku sheegtay khudbad ay Xildhibaannada Golaha Shacabka u jeedineysay, taas oo ay uga warbixineneysay xaaladda suurtagalnimada iney dalka doorasho ka dhici karto 2020-ka, taas oo aysan rajo wanaagsan ka muujin. Waxay sheegtay in inta ay siyaasad ahaan kala fog yihiin Soomaalidu aysan macquul ahayn in ay doorasho dhacdo.
“Waxaa muhiim u ah qabsoomidda hawlaha doorashada in ay jirto ka go’naansho iyo is-afraga siyaasadeed oo dhex mara dhamaan hogaanka siyaasadeed ee dalka” ayey tiri Xaliima Yarey. Waxay sheegtay in ay qasab tahay in ay mid ka ahaadaan, kana wada shaqeeyaan iney doorasho dahcdo Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada, Axsaabta Siyaasadda, Ururada Bulshada Rayidka iyo Daneeyayaasha Soomaaliya.
“Waxaan idinka codsanayaa in awooddeena oo dhan aan isugu geyno sidii aan dalka uga hirgelin lahayn doorasho qof iyo cod ah” ayey ku baaqday Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka, Xaliima Yarey, oo sheegtay in ay Beesha Caalamku diyaar u tahay in ay arrintaas ku taageeraan Soomaaliya.
Laakiin, Xaliima waxay Arbacadii u sheegtay xildhibaannada inuusan Golaha Shacbku ka shaqeyneyn Sharciga Doorashooyinka, kaas oo aysan la’aantiis waxba socon karin. Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan ayey uga mahadcelisay inuu xukuumadda uga dalbaday si deg deg ah iney ugu soo gudbiso Baarlamaanka Hindise Sharciyeedka Doorashooyinka Qaranka.
Gudoomiyihii hore ee golaha wakiillada Puntland oo geeryooday
Xildhibaan Jindi: Guddoonka Golaha Shacabka go’aan wey ka qaadan karaan baaqashada kulamada golaha